Liberal (လွတ်ပြန့်စွဲ)နိုင်သည်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » U.S. News » Liberal (လွတ်ပြန့်စွဲ)နိုင်သည်…
Posted by kai on Jun 28, 2012 in U.S. News |9comments
အမေရိကဖယ်ဒရယ်အစိုးရကို ပြည်နယ်တွေက ဝိုင်းတရားစွဲတဲ့အမှု ဆုံးဖြတ်ပါတယ်..။
Twenty six states sued over the law, arguing that the individual mandate, which requires people to buy health insurance or faceafine starting in 2014, was unconstitutional.
Supreme Court မှာ ရွေးရိုးစွဲ Conservative ၅ယောက် လွန်ပြန့်စွဲ Liberal၄ယောက်ရှိတာမှာ.. ရှေးရိုးစွဲတရားသူကြီးခေါင်းဆောင်က.. လွတ်ပြန့်စွဲဖက်ပါပြီး.. ၅-၄ နဲ့ အနိုင်ပေးလိုက်တာပါ..။
ကျုပ်ခန့်မှန်းရသလောက်.. လာမယ့် နိုဝင်ဘာသမ္မတရွေးပွဲမှာ.. အိုဘားမားနိုင်တော့မယ်ဖြစ်ပါကြောင်း.. ၇၅ရာခိုင်နှုန်းသေချာကြောင်း…
y David G. SavageJune 28, 2012, 8:11 a.m.
WASHINGTON — The Supreme Court led by Chief Justice John G. Roberts Jr. upheld the heart of President Obama‘s healthcare law Thursday, ruling that the government may impose tax penalties on those who do not have health insurance.The decision came ona5-4 vote, with the court’s four liberal justices joining with the chief justice.On one hand, Roberts agreed with the law’s conservative critics who said Congress does not have the power to mandate the purchase ofaprivate product such as health insurance.But the Affordable Care Act does not imposeatrue legal mandate on Americans, he said. It simply requires those who do not have health insurance by 2014 to payatax penalty.And that is constitutional, Roberts said. “The federal government does not have the power to order people to buy health insurance,” he wrote in the majority opinion. “The federal government does have the power to imposeatax on those without health insurance,” he added.
ပထမဆုံး လက်မက ကျုပ်ဟာဘဲ။
ကျွန်မ ကတော့ အမြဲ
Change … We can believe in….
…….. ဟို ဗိုလ်တွေမပါ… ပျော်စရာ ကောင်းပါလေ့
” ရှေးထုံးလဲ မပယ်နဲ့ ဈေးသုံးလဲ မလွယ်နဲ့တဲ့” အဲဒါဘယ်သူတွေ ပြောတာမှတ်တယ် လစ်ဗရယ်တွေတော်ရေ့…. သွပ်..သွပ်
ရွာထဲက အိုဗားမားနဲ့တူတဲ့ သများချစ်ချစ်ကို သတင်းမြန်မြန်ပေးရမယ်….. ၇၅%ဆိုတော့ အခြေအနေကောင်းမှာပါ နောက်သက်တမ်းကျမှဘဲ အနားကပ်ပီး ဂေဇက်က ကဒါခိုင်ကို လုပ်ကြံဖို့ကိစ္စရယ်
နူကလီးယား လောက်စာလုံး လုံးချင်နေတဲ့ အမာဒီနီကြောင်ကိုလဲ အပြတ်ရှင်းဖို့….. အဲလာတွေ ကပ်ပြောရမယ် …………..။
ဪ စကားမစပ် သများလဲ ကွန်ဒိုလီဇာပစ် ဖြစ်ချင်နေကြောင်း………………..
အောင်ပု အိမ်ရှေ့က ဖြတ်ရင် သိပ်စိတ်မချရလို့
ဦးခိုင်ရဲ့ အကြားအမြင်ကို စောင့်ကြည့်မယ်။
ဒါ ကို အကြား အမြင်လို့ ပြောလို့ရပါ့မလား မသိဘူးနော်။
ဒါမှ မဟုတ် “ဒိဗ္ဗစက္ခု အဘိညာဉ်”လို့ပြောလို့ရမလား။
အဘိညာဉ်ဆိုတာက တော့ အထူးသိနေတာ..အထူးသိသွားတာကို အဘိ-အထူး။ ညာ-သိတာလို့ ပြောသံ ကြားဖူးတယ်။
နိုင်ငံရေးကျားကွက်ကို အထူးသိတဲ့ အမြင်ပေါက်နေတာပေါ့နော်။
အိုဘားမား ဆို တဲ့ ခု အမေရိကန်သမ္မတ က ငါတို့ နိုင်ငံ ရဲ့ ရှေးဟောင်း နာမည် ( BURMA ) တွဲပါနေလို့ လား မသိဘူး အထွဠ်အထိပ် ရောက်နေတယ်။